Warbixin: Xaakimka Magaalada Dubai Ee Wadanka imaaraatka Carabta oo Kaniisad Ka Dhisay Koonfurta Dalka Britain.
Thursday June 29, 2017 - 14:05:48 in Wararka by
Si lama filaan ah mid kamida Boqorrada maamula wadanka Imaaraatka Carabta ayaa lacago boqolaal kun oo dollar ah ku bixiyay dhismaha Kaniisad ay yeelanayaan dad Kirishtaan ah oo kunool wadanka Ingiriiska.
Guddoomiyaha Dubai waa calmaani ay isku dhowyihiin Reergalbedka
Warbaahinta maxalliga magaalada London ayaa baahisay warbixinno sheegaya in Xaakimka magaalada Dubai n uu lacago ku tabarucay deegaan ay kunool yihiin dad fuqaro ah Koonfur Bari wadanka Britain.
Guddiga degmada Goodolphin Cross oo katirsan gobolka Cornwall ee wadanka Ingiriiska ayaa warbaahinta u xaqiijiyay in Fariin Email ah ay ka heleen Xaakimka magaalada Dubai Ninka lagu magacaabo Max’med Bin Raashid Aala Maktuum fariintaasi oo sheegaysa in lacago Tabarucaad ah uu ku bixinayo dhismaha iyo dayactirka Kaniisad ay leeyihiin dadka fuqarada gobolka Cornwal ee wadanka Britain.
Richard Mickey oo kamid ah guddiga dhaqaala uruurinta mashruuca dib udayactirka Kanisadda degmada Goodolphin Cross ayaa sheegay in baraha internet-ka ay dhigeen codsi ah in laga kaalmeeyo dib udayactirka Kaniisadda degmada oo burbur xooggan ku yimid isagoo hadlayay wuxuu yiri "dadka fuqarada ah ee kunool degmadan waxay tabarucaad ahaan ucodsadeen lacag dhan 95,000 oo Gini si Kaniisadda loo dayactiro balse fariin dhanka Emailka ah ayaa nooga timid Xaakimka Dubai arrinkaas oo lama filaan nagu noqday”.
Wargeys maxalli ah oo kasoo baxa gobolka Cornwall oo qisadan daabacay ayaa sheegay in dadka u ololeynaya dib udayactirka Kaniisadda ay lama filaan ku noqotay Fariinta uga timid Max’med Bin Raashid "Run ahaantii waa rumeysan waynay Fariinta Email-ka ee nooga timid Sheekh Max’med Bin Rashid balse waxaa xigay Taleefan toos ah oo nooga yimid magaalada Dubai oo lagu xaqiijinayo in 25,000 oo Gini lagu tabarucay dhismaha Kaniisadda” sidaas waxaa yiri Richard Mickey oo kamid ah guddiga tabarucaadka gobola Cornwall ee dalka Ingiriiska.
Lacagta uu bixiyay xaakimka Dubai ayaa dollar ahaan u dhiganta $ 32435, lacagtaas waxay quudisaa Boqolaal qof oo muslimiin fuqara ah oo kunool Afrikada dhexe,Yemen ama Soomaaliya.
Lacagta uu bixiyay xaakimka magaalada Dubai ayaa qeyb ahaan lagu dayactiray Kaniisadda balse wali waxaa dhiman lacag dhan 35,000 oo gini si loogu dayactiro qeybta arrimaha bulshada Kaniisadda sidaas waxaa sheegay guddiiga tabarucaadda.
Dadka Fuqarada Nasaarada degmada Goodolphin Cross ayaa layaabay sida Hoggaamiye muslim sheeganaya oo dad Muslimiin ah madax u ah uu dhaqaale aad u xooggan ugu bixiyay dhismaha Kaniisad ay leeyihiin dadka Kirishtaanka ah.
Maamulka gobolka Cornwall ayaa ugu baaqay Max’med Bin Raashid in uusoo booqdo gobolkooda si uu indhihiisa ugu arko waxa lagu qabtay lacagtii uu ku tabarucay dayactirka Kaniisadda.
Dowladda imaaraatka Carabta oo gacanta ku heysa dhaqaala aad ufarabadan ayaa sanadadii lasoo dhaafay usii dhowaanaysay dowladaha reergalbeed waxaana soo shaac baxday in madaxda dowladdaas ay dhaqan ahaan usii dhowanaayaan Kirishtaanka iyo Hinduuska.
Sanado ka hor ayay dowladaha imaaraatka Carabta Macaabid waaweyn oo Dahab ka sameysan dadka Hindida uga dhistay magaalooyinka Dubai iyo Abuu Dhabi iyadoo tallaabadaas marmarsiimo uga dhigatay in 2 milyan oo shaqaale Indian ah ay ka shaqeeyaan garoomada UAE sidaasna ay usameysay.
Imaaraatka Carabta ayaa dhaqaale malaayiin dollar ah ku bixiya duullaanada lagu qaaday wadamo ay kamid yihiin Afghanistan, Ciraaq, Yemen, Somalia iyo Yemen waana dowlad liiska Argagaxisada ku tiimbaraysa dhammaan dadka muslimiinta ah ee diinkooda ku ad-adag.
Isha Warka: BBC Arabic
Kacdoon wadayaasha wadanka Lubnaan oo dalbaday in ay iscasisho Xukuumadad Beyruut.
Mareykanka oo ciidamadii uu ka saaray Suuriya u daad guraynaya dalka Ciraaq.